အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV စာရင်းများ | ListaIPTVtelevision.com
လက်တင် IPTV M3U
IPTV M3U လူကြီးများ
Movistar Plus အား
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV စာရင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို စားသုံးသည့်ပုံစံကို ပြောင်းလဲစေသည့် နည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် IPTV ဖြစ်သည်။
နာမည်ကြီး အခမဲ့ IPTV ချန်နယ်စာရင်းများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေမှုအများဆုံး ဖိုင်အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနဲ့။
အခမဲ့စာရင်းများကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
IP ရုပ်မြင်သံကြား ပရိုတိုကော (IPTV အဖြစ် အတိုကောက်) ၎င်းသည် ရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားတို့ထက် အားသာချက်များစွာကို ပြသသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ အားသာချက်များကို နားလည်စေရန်နှင့် မွမ်းမံထားသော စာရင်းများကို ရှာဖွေနည်း၊ စပိန် သို့မဟုတ် လက်တင်အချို့မှ ချန်နယ်များကို ရှာဖွေရန်နှင့် သိရန်တို့ကို ပြသရန်၊ သင့် Smart TV သို့မဟုတ် PC အတွက် ဤစနစ်က ဘာလဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါပစ္စည်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။
IPTV ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
IPTV သည် အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လွှင့်ရန် bandwidth ၏ အခွင့်ကောင်းကိုယူ၍ ရုပ်မြင်သံကြားပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
OTT (Over The Top) မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် မတူဘဲ၊ IPTV သည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် သီးသန့် bandwidth ကို သီးသန့်အသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် ချန်နယ်များသည် အပ်ဒိတ်အမြန်နှုန်းများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ရုတ်တရက် ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းများ မရှိပါ။
2022 ခုနှစ်သည် ၎င်းတို့ တီထွင်ထားသည့် ဤအင်တာနက်အစီအစဉ်များ၏ bandwidth တွင် ရှိနေသောကြောင့် ၎င်းသည် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အမြဲလိုလို ပူးတွဲပါရှိသည့် ဤပလပ်ဖောင်းအမျိုးအစားကို စုစည်းထားသည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, IPTV ရုပ်မြင်သံကြားကို များသောအားဖြင့် ဖိုက်ဘာအစီအစဉ်ဖြင့် အခမဲ့ပေးသည်။အစီအစဉ်၏အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ သင့်ချန်နယ်များတွင် စံသတ်မှတ်ချက် (SDTV) သို့မဟုတ် မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု (HDTV) ရှိမရှိနှင့် သင်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ပရိုဂရမ်ရေးခြင်းတွင် ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စပိန်ရှိ IPTV နည်းပညာသည် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အခကြေးငွေဖြင့် အမြဲတမ်းနီးပါး ပရိုဂရမ်စာရင်းများကို ကမ်းလှမ်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ပလပ်ဖောင်းများ ရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Movistar+ သည် စပိန်ရှိ IPTV ၏ အကောင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်သည်။လူကြိုက်များသော Partidazo ကဲ့သို့သော သီးသန့်ဖြစ်ရပ်များ၏ ထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်းများအတွက် ထင်ရှားသည်။
သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် နိုင်ငံအတွင်း စတင်ကျင့်သုံးနေသည့် နည်းပညာမဟုတ်သလို လက်တင်လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုလုံးတွင်လည်း စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
Jazztel သည် စပိန်တွင် ဤနည်းပညာကို Movistar နှင့်အတူ ရှေ့ဆောင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Jazztel TV နှင့် Yacom တို့သည် အင်တာနက် ပရိုတိုကော ရုပ်မြင်သံကြား ဝန်ဆောင်မှု နှစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မရှိကြတော့ပေ။
လက်တင်အမေရိကတွင်၊ Movistar Chile နှင့် ETB (Colombia) တို့သည် ဤအဝေးထိန်းနည်းပညာအတွက် အကြီးကျယ်ဆုံးကတိကဝတ်ပြုထားသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ထဲမှ သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်း၏အားသာချက်များကို အသေးစိပ်ဖော်ပြပါမည်။ ဟုတ်ကဲ့။
Smart TV များနှင့် PC များအတွက် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုနှင့်အတူ 2022 ခုနှစ်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုရန် အဝေးထိန်းပလပ်ဖောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်၊ ၎င်းတို့သည် IPTV ဝန်ဆောင်မှုများကို လူများပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေရန် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းရန်အတွက် ဖြစ်သောကြောင့်၊ 2022 ခုနှစ်တွင် ချန်နယ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုပါ။
ဤဝေးလံခေါင်သီသောနည်းပညာ၏မရှိမဖြစ်အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၊ ၎င်းသည် bandwidth ကိုအခြေခံသောကြောင့်၎င်းသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုမှန်ကန်စွာလက်ခံနိုင်၊ ထုတ်လွှင့်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုများစွာသည် မိုဘိုင်းဒေတာအစီအစဉ်နှင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မွမ်းမံထားသောမိုဘိုင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် အချက်ပြမှုများရှိသောကြောင့် အိမ်ကွန်ရက်အတွက် မလိုအပ်ပါ။ ဤအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသောအက်ပ်များ၏ ဒေတာသုံးစွဲမှုကြောင့် မထောက်ခံပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ သေချာပါတယ်။ အကြောင်းအရာများကို စပိန်၊ လက်တင်စပိန် သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ကြည့်ရှုပါ။သီးသန့်အကြောင်းအရာနှင့် Smart TV ၊ Android သို့မဟုတ် iOS မိုဘိုင်းလ် သို့မဟုတ် PC ပရိုဂရမ်ပေါ်တွင် မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုကြိုးစားရကျိုးနပ်တဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။
တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာ အဝေးထိန်းပရိုဂရမ်ကို နေရာတိုင်းနှင့် စက်အားလုံးတွင် သယ်ဆောင်ရန်မဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် 2022 ခုနှစ်တွင် IPTV ၏ အရေးကြီးသောအားသာချက်မှာ သီးသန့်ချန်နယ်များနှင့် အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြေဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ချန်နယ်တွေ ချောင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ IPTV ပရိုဂရမ်းမင်းစာရင်းများ အပြည့်အစုံ.
၎င်းတို့သည် ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော်လည်း၊ ဥပမာ၊ ဘောလုံးကမ္ဘာရှိ အရေးကြီးဆုံးလိဂ်များကဲ့သို့သော အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ မမြင်နိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိုင်ငံတစ်ခုစီအတွက် မတူညီသောအချက်အလက်များရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အောက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံအလံကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် လင့်ခ်များကို ချန်ထားခဲ့သည်-
အာဂျင်တီးနားအတွက် IPTV m3u စာရင်းများကို အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသည်။
ဘရာဇီးအတွက် IPTV m3u စာရင်းများကို အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသည်။
ချီလီအတွက် အခမဲ့ IPTV m3u စာရင်းများ
ကိုလံဘီယာအတွက် အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV m3u စာရင်းများ
အီကွေဒေါအတွက် အခမဲ့ IPTV m3u စာရင်းများ
စပိန်အတွက် IPTV m3u စာရင်းများကို အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသည်။
မက္ကဆီကိုအတွက် အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV m3u စာရင်းများ
USA အတွက် အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV m3u စာရင်းများ
ထို့ကြောင့် သင်သည် ဂျပန် anime ချန်နယ်များ၊ လက်တင်ရုပ်ရှင်ရုံ သို့မဟုတ် ပရိတ်သတ်တစ်ဦးဖြစ်လျှင် ဘောလုံးကြည့်ရှုရန် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော IPTV စာရင်းများ ဤနည်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရှိသူများ၏ 2022 ရာသီတွင်၊ Movistar+ ပရီမီယံနှင့် ၎င်းကိုပေးဆောင်ထားသရွေ့ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာအားလုံးကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမကဘဲ အဝေးမှ IPTV နည်းပညာသည် ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သို့သော် 2022 တွင် ဤအဝေးထိန်းနည်းပညာသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ သင့်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာကို ဖွင့်ထားသရွေ့ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးများကို သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် IPTV ရုပ်မြင်သံကြားကမ်းလှမ်းချက်များတွင် တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည်။: မကြုံစဖူး အမျိုးမျိုး။
ဝေးလံခေါင်သီသော ပရိုဂရမ်စနစ်သည် ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် ဒေသအဆင့်မှ ချန်နယ်အားလုံးကို ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်း၊ မည်သည့် လက်တင်ချန်နယ်၊ United Kingdom သို့မဟုတ် United States မှ ချန်နယ်များနှင့် ဥရောပနှင့် အာရှရှိ မည်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်မှမဆို ကြည့်ရှုနိုင်မှု စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဖျော်ဖြေရေး ကန့်သတ်ချက်များကို သင်က သတ်မှတ်ပေးသည်။
IPTV အတွက် အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော စာရင်းများ
အခမဲ့ IPTV စာရင်းများသည် PC နှင့် Smart TV များအတွက် ဖိုင်များဖြစ်သည်။ (ယေဘုယျအားဖြင့်၊ IPTV ပရိုဂရမ်များအတွက်) မတူညီသော ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ်များ၏ streaming (အဝေးထိန်းဆာဗာများ) မှတဆင့် အကြောင်းအရာများ၏ အချက်အလက်အပြည့်အစုံကို သိမ်းဆည်းပေးသော။
ဤစာရင်းများ၏ အားသာချက်မှာ ၎င်းတို့သည် အခမဲ့ချန်နယ်များ၏ မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသော အချက်အလက်များကို သင်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အခြားအရာများကဲ့သို့သော အခပေးချန်နယ်များ၏ အခပေးချန်နယ်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘောလုံး၊ UFC သို့မဟုတ် ဘတ်စကတ်ဘောကဲ့သို့သော အားကစားများမှ
Movistar + Premium ရှိလျှင် Movistar Plus ကိုကြည့်ရှုရန်
ဤနည်းဖြင့်၊ Movistar၊ လက်တင်ရုပ်ရှင်ချန်နယ်များ (သို့မဟုတ် မည်သည့်လက်တင်ချန်နယ်) နှင့် သင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် သီးသန့်အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်မဆို သင်စာရင်းပေးသွင်းထားသရွေ့ သင့်တွင် Movistar+ ကို PC အတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပရိုဂရမ်းမင်းအချက်အလက်ပါရှိသော ဤဖိုင်များထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ m3u ပုံစံနှင့် VLC၊ သို့မဟုတ် Internet Protocol IP မှတစ်ဆင့် ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာကို ဖွင့်သည့် အပလီကေးရှင်းများသို့ အပ်လုဒ်တင်ထားသည်။ PC အတွက် SSIPTV နှင့် ၎င်း၏ မွမ်းမံထားသော စာရင်းများ မကြာသေးမီက အရောင်းသွက်လာသော်လည်း လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်.
*အဝင်အထွက်များပြားမှုကြောင့် အချို့သောလင့်ခ်များသည် လောလောဆယ်တွင် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို စမ်းကြည့်ပါ။ အပြာရောင်ခလုတ်ပါသည့်အရာသည် အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သည်။ လင့်ခ်များကို တတ်နိုင်သမျှ တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ၎င်းတို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ရိုးရှင်းစွာ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သည်။
IPTV အားကစားစာရင်းများ (2022 အပ်ဒိတ်)
စပိန် IPTV စာရင်းများ (2022 အပ်ဒိတ်)
လက်တင် IPTV စာရင်းများ (2022 အပ်ဒိတ်)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ IPTV စာရင်းများ +18 (2022 အပ်ဒိတ်)
IPTV ရုပ်ရှင်များစာရင်း (2022 အပ်ဒိတ်)
IPTV စီးရီးများစာရင်းများ (2022 အပ်ဒိတ်)
အောက်ပါဆောင်းပါးများတွင် အခြားသော သီးခြားချန်နယ်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်-
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော Exabyte တီဗီစာရင်းများ
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV အစွန်းရောက်စာရင်းများ
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ M3U IPTV စာရင်းများ
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော လက်တင် M3U IPTV စာရင်းများ
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV M3U Movistar စာရင်းများ
အခမဲ့နှင့် မွမ်းမံထားသော IPTV Smarters Pro စာရင်းများ
IPTV အတွက် အခမဲ့စာရင်းများကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။
Smart TV၊ PC ပရိုဂရမ်တစ်ခု သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းသည် အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ တီဗီကြည့်ရန် စမတ်တီဗီကို ကန့်သတ်မထားဘဲ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
2022 ခုနှစ်တွင်၊ ဤအဝေးထိန်းနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်ပလပ်ဖောင်းများသည် စက်အားလုံးနီးပါးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲအရင်းအမြစ်များရှိသည်။
ဥပမာများကိုကိုးကားရန်၊ မည်သည့်လည်ပတ်မှုစနစ်၏ PC များအတွက်ပရိုဂရမ်များရှိသည်။ Windows PC အတွက် 32-bit နှင့် 64-bit ပရိုဆက်ဆာများအတွက် အခပေးနှင့် အခမဲ့အပြင် HD playback နည်းပညာကြောင့် PC များအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာများရှိပါသည်။ အခမဲ့မွမ်းမံထားသော m3u စာရင်းများ.
Smart TV များတွင်၊ လူကြိုက်အများဆုံး Smart TV အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် မူရင်းအပလီကေးရှင်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Samsung၊ Philips၊ Sony၊ Hisense၊ Panasonic နှင့် LG အတွက် အဝေးထိန်းတီဗီကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စမတ်တီဗီများအတွက် အပ်ဒိတ်အက်ပ်များ။
PC နှင့် Smart TV အတွက် ပရိုဂရမ်များအပြင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် Apple TV သို့မဟုတ် Android Box တို့တွင်လည်း ဤအကြောင်းအရာကို ခံစားနိုင်ရန် အပ်ဒိတ်အက်ပ်များကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပြူတာနဲ့ ရုပ်ရှင်လောကကို ဝါသနာပါတယ်။ ရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် မည်သည့် TV ကိုမဆို အွန်လိုင်းကြည့်ခြင်းကို နှစ်သက်သူများအတွက် ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကြိုးစားနေသော ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ။
06:06 မှာ 2019/19/01
မင်္ဂလာပါ၊ ottplayer အတွက် စာရင်းဘယ်လိုရနိုင်လဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ အသစ်ပါ။ ကျေးဇူးပါ။
admin ရဲ့ သူ says:
24:06 မှာ 2019/16/40
OTTPlayer စာမျက်နှာတွင်- https://listaiptvtelevision.com/ottplayer-listas-gratis-para-pc/
Tony သူ says:
04:11 မှာ 2019/02/28
မင်္ဂလာညနေခင်းမှာ စာရင်းသွင်းချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုလဲမသိဘူး ကျေးဇူးပါ။
ဂျိုးဇက်လိုပက်ဇ် သူ says:
04:11 မှာ 2019/19/59
edilberto Arcila သူ says:
23:06 မှာ 2019/18/09
ခရုနှင့် rcn တည်ငြိမ်ပြီး အခမဲ့ရှိသည့် Meu စာရင်းများ
ဆာဂျီယို သူ says:
31:08 မှာ 2019/18/09
တည်ငြိမ်တဲ့အရာကို အလကားလိုချင်တယ်၊ မိနစ်တိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်တောင် အဲဒါကိုကြည့်ရင် ဂရုမစိုက်ဘူး
04:09 မှာ 2019/17/21
Maripaz သူ says:
18:09 မှာ 2019/23/59
အခမဲ့ ssiptv စာရင်းများ
Patrick Zambrano သူ says:
25:04 မှာ 2020/21/36
kodi အတွက် m3u စာရင်းကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
01:09 မှာ 2019/01/18
မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းပါ၊ ငါမင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်၊ ကောင်းတာကိုမနာလိုပါ။
Antoni သူ says:
19:09 မှာ 2019/21/49
Xtream ပြိုလဲမှုအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
23:09 မှာ 2019/08/46
အာရုန်သည် သူ says:
01:10 မှာ 2019/19/41
ssiptv အတွက် စာရင်းများကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
Marcelo Gustavo del Valle သူ says:
30:09 မှာ 2019/03/54
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး SSIPTV အတွက် URL ကို ပေးလို့ရပါသလား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Walfri သူ says:
30:09 မှာ 2019/17/13
iptv သည် telemundo၊ univision စသည်တို့နှင့် အမြဲကြုံတွေ့နေရသော လိုင်းများနှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်သည်။
02:10 မှာ 2019/16/33
ကျွန်ုပ်၏ ssiptv ကို သင့်စာရင်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကို ပြောပြပါ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Joel သူ says:
07:10 မှာ 2019/02/37
စပိန်နှင့် အင်္ဂလိပ်လိဂ်များအတွက် ssiptv အားကစားစာရင်းများ လိုအပ်ပါသည်၊ ကူညီပေးနိုင်သော သို့မဟုတ် လိပ်စာကို မျှဝေပေးနိုင်သူ ကျေးဇူးပြု၍...
Cristo သူ says:
14:10 မှာ 2019/11/46
tv အတွက် itv ကုဒ်တွေကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
14:10 မှာ 2019/11/47
itpv ကုဒ်တွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ စက်ပစ္စည်းနဲ့ တီဗီအတွက် ကုဒ်တွေအတွက် ဘယ်သူကို မေးလ်နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရမလဲ
ကားရှိမုနျ သူ says:
16:10 မှာ 2019/09/23
စမတ်တီဗီအတွက် iptv စာရင်းများကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
စမတ်တီဗီအတွက် iptv စာရင်းများကို လိုချင်ပါသည်။
dario သူ says:
30:11 မှာ 2019/19/29
မင်္ဂလာပါ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါစေ။
LUIS A. GARCIA NUNEZ သူ says:
28:12 မှာ 2019/20/12
အဖွင့်စာရင်းများကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏စမတ်တီဗီအတွက် Nuevo Leon၊ Mexico မှဖြစ်ပါသည်။
Raul Rios သူ says:
26:01 မှာ 2020/13/21
codi အလုပ်မလုပ်သေးရင် ပြောပြပေးလို့ရမလား..ကျေးဇူးပါ။
28:01 မှာ 2020/09/50
08:03 မှာ 2020/19/41
ဟယ်လို ssiptv အတွက် url ပေးလို့ရလား ကျေးဇူးပါ။
mauro သူ says:
12:03 မှာ 2020/13/26
မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ကျွန်တော် အခုမှ အသင်းဝင်ဖြစ်လာပါပြီ ဖော်မြူလာကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ
Uruguay မှ mauro ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Fali သူ says:
31:01 မှာ 2020/20/24
မင်္ဂလာပါ ဘယ်မှာလဲ LG TV အတွက် AppSSiptv အတွက် အခမဲ့စာရင်းကို ကျွန်ုပ်ရနိုင်ပါသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
micaela p သူ says:
21:02 မှာ 2020/16/59
မင်္ဂလာပါ၊ ဥရုဂွေး၊ အာဂျင်တီးနား၊ android 9.0 tv box အတွက် ဘောလုံးကြည့်ရှုရန် အက်ပ်ရှိပါသလား။
manuel benites သူ says:
07:04 မှာ 2020/02/20
မင်္ဂလာပါ အခမဲ့ iptv စာရင်းကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။
Eva သူ says:
01:05 မှာ 2020/02/22
ကလေးချန်နယ်များနှင့် ရုပ်ရှင်များ 2020 ၏ iptv စာရင်းကို ပေးနိုင်ပါသလား။
နိုင်ငံတော် သူ says:
06:05 မှာ 2020/23/15
အာဂျင်တီးနားမှ ချန်နယ်များပါသော လေးနက်သော IPTV တစ်ခု လိုအပ်ပါသည် သိသူများ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကို ရေးပေးပါ။
Mick သူ says:
04:08 မှာ 2020/13/16
တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်တို့မှ ချန်နယ်များစာရင်းကို ငါရှာဖွေနေပါသည်။
၎င်းတို့ပါရှိသော မည်သည့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင်သိပါသလား။
ဂျွန် ဆန်းချက်ဇ် သူ says:
10:09 မှာ 2020/00/17
PR ကျေးဇူးပြု၍ DUPLEX IPTV အတွက် M3U စာရင်းများ
ယူလီယာနာ သူ says:
11:10 မှာ 2020/14/08
ss iptv ကိုလံဘီယာချန်နယ်များစာရင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သိလိုပါသည်။
Kleber Collaguazo သူ says:
27:10 မှာ 2020/14/32
smart tv မှမဟုတ်သော အက်ပ်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေမည်ကို သင်မည်သို့သိလိုသနည်း။
02:11 မှာ 2020/20/59
ပြင်ပ developer များက ဖန်တီးသည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Android ဖုန်းနှင့်တူသည်၊ Play Store မှ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သမျှကို Android မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီမှ ဖန်တီးထားသည်။
RAPC1357 သူ says:
13:11 မှာ 2020/04/46
tyc အားကစား၏ url ကဘာလဲ။
14:12 မှာ 2020/21/41
ဘယ်အရာက အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်မလဲ၊ မရပ်တန့်သရွေ့ ပေးဆပ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။
ကာမင်ဇာ သူ says:
27:01 မှာ 2021/14/20
မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Sony Bravia ရှိပြီး စပိန် သို့မဟုတ် လက်တင်ချန်နယ်များစာရင်းကို ထည့်သွင်း၍မရပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် အမြဲတမ်း Conexion မအောင်မြင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဂျုံး သူ says:
18:02 မှာ 2021/22/35
ကျေးဇူးပြု၍ ချန်နယ်များစာရင်းကို ကျွန်ုပ်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
22:02 မှာ 2021/15/52
သင့်တွင် compi ရှိ ပရီမီယံ iptv ချန်နယ်များအားလုံး၏စာရင်းရှိသည်။
Wilson Betancourt သူ says:
27:03 မှာ 2021/21/13
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ Wilson Betancourt ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ကိုလံဘီယာမှဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်က မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် လေးထောင့်ချိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးပြဿနာများကြောင့် ကေဘယ်လ်ရုပ်မြင်သံကြားမရရှိပါ။
smar tv အတွက် တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ကိုယ်ပိုင် m3u စာရင်းကို ရယူလိုပါသည်။
ပရီမီယံချန်နယ်များနှင့်အတူ၊ သို့သော်မည်မျှပင်ကြိုးစားခဲ့ပါစေ ငါမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
Atte Wilson Betancourt
Filip သူ says:
09:04 မှာ 2022/23/25
ဟယ်လို၊ F1 ကို အခမဲ့ကြည့်ဖို့ စာရင်းပေးလို့ရလား။
© 2022 ListaIPTVtelevision.com · မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီးသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ ဥပဒေရေးရာအသိပေးစာ Contacto Cookies တွေကိုပေါ်လစီ ကိုယ်တို့အကြောင်း?